पूर्वराजदूत हत्याको १ सय ७२ दिन – प्रहरीकोे पुरानै जवाफ: ‘अनुसन्धान जारी छ’ « Lokpath
पूर्वराजदूत हत्याको १ सय ७२ दिन – प्रहरीकोे पुरानै जवाफ: ‘अनुसन्धान जारी छ’
प्रकाशित मिति : २४ माघ २०७५, बिहीबार ११:४४
२३ असोज ०७४ मा बानेश्वरमा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद कुमार गौचनको गोली हानी भएको हत्या भएको झण्डै एक वर्षपछि राजधानीमा सर्वसाधारणलाई त्रसित हुने गरि ‘हाइप्रोफाइल मर्डर’ भयो ।
गत भदौ ४ गते काठमाडौंको बबरमहलमा फ्रान्सका लागि पूर्व नेपाली राजदूत केशवराज झा आफ्नै निवासमा मृत अवस्थामा भेटिए ।
पूर्व नेपाली राजदूत झाको हत्या भएको आज एक सय ७२ दिन भएको छ ।
पूर्व नेपाली राजदूत झाको हत्या भएको आज एक सय ७२ दिन भएको छ । तर प्रहरीले आजको दिन सम्म अपराधी त के अभियुक्त पनि सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
राष्ट्रका महत्वपूर्ण व्यक्ति, देशको राजधानीजस्तो स्थानमा आफ्नै घरमा सुतिरहेका अवस्थामा मृत भेटिनुले ठूलै हल्लीखल्ली मच्चायो ।
घटनाको प्रकृति हेर्नेबित्तिकै प्रहरीले हत्या नै हो भन्यो र अनुसन्धान शुरु गर्यो । तर घटना भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि प्रहरीले हाईप्रोफाईल मर्डरका दोषी पत्ता लागाउन सकेको छैन ।
घटना भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि प्रहरीले हाईप्रोफाईल मर्डरका दोषी पत्ता लागाउन सकेको छैन ।
घटनाको वस्तुस्थिति हेर्दा गौचन हत्याकाण्डजस्तो ‘प्लान्ड मर्डर’ नदेखिए पनि घाँटी र टाउकोमा चक्कु प्रहार गरेर हत्या गरिएको घटना रहस्यमय रहेको र छिट्टै नतिजा निकाल्ने हिसाबले अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरीको भनाई थियो ।
परराष्ट्र सेवामा ३४ वर्ष योगदान गरेका झा फ्रान्सका लागि २४ मार्च १९९३ देखि ३१ डिसेम्बर १९९७ सम्म नेपालका राजदूत थिए । उमेरले ८० पुगिसकेका भए पनि पछिल्लो समय पनि उनी सामाजिक कार्यमा उत्तिकै सक्रिय थिए ।
८० वर्षीय झा भदौ ४ गते काठमाडौंको बबरमहलस्थित आफ्नै निवासमा सुतिरहेको अवस्थामा मृत भेटिएका थिए । टाउकोमा धारिलो हतियारले प्रहार गरिएकाले उनको शरीर रगतभरी रगत लत्पतिएको थियो ।
घटनाको प्रकृति हेरेर प्रहरीले हत्या भएको आशंका गरेको थियो । प्रारम्भीक अनुसन्धानको क्रममा हत्यामा प्रयोग भएको हतियार घरेलु चक्कु तथा झाको कोठाको झ्यालको जाली काटिएको देखिए पनि प्रहरीले घटनाको वास्तविक तथ्य अहिले सम्म पत्ता लगाउन सकेको छैन ।
आफ्नै कोठामा घरेलु हतियार प्रयोग गरि, मानिस छिर्न नसक्ने झ्यालको जाली काटिएको अवस्था र ओछ्यानमा सुतेका झा मृत अवस्थामा भेटिएकाले उनकै घरको कामदार प्रहरीको शंकाको घेरामा परेका थिए ।
तत्काल मुचुल्का उठाएर प्रहरीले उनको शवलाई पोष्टमार्टमका लागि महाराजगंजस्थित शिक्षण अस्पतालमा पुर्यायो ।
महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले घटनाबारे छानबिनका लागि झाकै घरमा काम गर्ने माली, भान्से र गार्डलाई पक्राउ गरेको थियो । हत्यामा ति तीनै जनाको संलग्नता पुष्टि हुन नसकेपछि प्रहरीले उनीहरुलाई धरौटीमा रिहा गर्यो । झासँगै घरमा श्रीमती र दुई कामदार बस्दै आएका थिए ।
घटनास्थलमा भेटिएको चक्कु जसलाई प्रहरीले सबै भन्दा बलियो सबुत प्रमाण भन्दै आएको थियो । त्यसको बाबजुत पनि अनुसन्धान फितलो बन्दै गइरहेको छ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले झाको हत्याबारे अनुसन्धान जारी रहेको बताएपनि अहिलेसम्म केही खास उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।
हत्याको एक सय ७२ दिन: अनुसन्धान जारी, उपलब्धि शून्य ।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रहरी उपरिक्षक तथा प्रवक्ता नरेन्द्र उप्रेतीले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको र केही समय लाग्ने लोकपथलाई बताए ।
उप्रेती भन्छन्, ‘अनुसन्धान जारी छ । केहि नयाँ अपडेट आयो भने हामी तपाईहरुलाई खबर गर्छौ ।’
‘अनुसन्धान जारी छ । केहि नयाँ अपडेट आयो भने हामी तपाईहरुलाई खबर गर्छौ ।’
उता कञ्चनपुरकी १३ बर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको एक सय ९४ दिन पुगेको छ । तर हत्या कसले गर्यो अत्तोपत्तो छैन । अनुसन्धान भइरहने तर रिजल्ट नआउने कस्तो खालको अनुसन्धान गर्दैछ प्रहरी ? यतिबेला सदन देखि सडक सम्म उठेकोे ‘साझा’ प्रश्न हो यो ।
अनुसन्धान भइरहने तर रिजल्ट नआउने कस्तो खालको अनुसन्धान गर्दैछ प्रहरी ? यतिबेला सदन देखि सडक सम्म उठेकोे ‘साझा’ प्रश्न हो यो ।
यता निर्मलाको हत्यारा को हो भनेर सदनमा आवाज उठिरहँदा पूर्वराजदूत झाको हत्या र हत्याराको विषयमा कुनै पनि प्रश्न उठेका छैन ।
हिजो अर्थात् बुधवार बसेको संसदमा गृहमन्त्री राम बहादुर थापालाई प्रश्नको ओइरो लाग्यो । निर्मलाको हत्या र तामाङद्धयको इन्काउटरको प्रश्नमा जुहारीजस्तो चलेको संसदमा किन झा बारे सबै चुप लागे ?
सदन देखि सडक सम्म निर्मलाको हत्यारा खोई ? हत्यारा पत्ता लगाउ ! कि सिंहदरबारमा छन् हत्यारा भनेर चर्को आवाज उठ्दा हाई प्रोफाइल मर्डरबारे सबै मौनता साँधिरहेका छन् ।